नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): उपहार
उ उसैको मातृभाषा बोल्छ । ‘आइ हेट माइ फादर,
हि इज ग्रीडी ! आइ लभ यू शाइवा, आइ
लभ यू ! यू आर असम !’
साइकल पाएपछि केभिन तीन हात उफ्रियो।
जीन्दगीको सायद सबैभन्दा खुशीको दिन होला आज,
तिमीले जति यसलाई आफ्नो सोच्यो त्यति
उसको साख्खै वाउले पनि कहिल्यै साचेन।’ आँखाले केभिनतिर इसार गर्दै क्यारोलिनले भनि ।
मलाई साइकल पसलभित्रै बेस्सरी ‘हग’ गरी।
आजको उसको ‘हग’ सामान्य
थिएन । भित्रभित्रै काउकुति लाग्यो । कताकता असहज महशुस भयो तर पनि सहज भएको अभिनय गरेँ। खासमा
अभिनयमात्र गरिन सहज हुन धेरै प्रयत्न गरे । अमेरिकीहरुका लागि ‘हग’ सामान्य
जस्तै भएता पनि मन परेको र नजिकको मान्छेसँग मात्र गर्छन। तर हामी जस्तो पूर्वीय
सभ्यता र सँस्कारमा हुर्केको मान्छेका लागि अझै पनि ‘हग’ सँस्कार सहज
हुन नसकेकोले होला, मलाई आज
निक्कै असहज अनुभूत भयो । सायद क्यारोलिनाको
र यौवनले गर्दा पनि
होला ! मैले क्यारोलिनाका हात
सुम्सुम्याउँदै उसको भावुक अनुहारमा हेरिरहे । उसले
पनि मेरो आँखामा उसका आँखा
केहीबेर विछ्याइरही ।
क्लारोलिनको अनुहारलाई एकपटक फेरि पढेँ – अमेरिकीहरु
सम्पन्न भएर पनि कति असम्पन्न छन् ? धनी भएर पनि कति गरीव छन् ? यिनीहरुसँग सबैथोक भएर पनि लाग्छ केही
छैन। हुन त नभएको हैन तर उपयोग गर्नमात्र नजानेको हो, व्यवस्थापन गर्न नजानेको हो ।
नाथे दूइसय डलरको साइकलका लागि केभिन सधैं निराश थियो । नौ वर्षको
वालकललाई दूइसय डलरको
साइकल किनिदिन न बाबु तयार छ न आमा।
बाबु आमा भएर
पनि नभए जस्तो । बालटुहुरो जस्तो ।
केही दिन अघी केभिन रोएको मैले देखेर मैले
क्यारोलिनालाई सोधेको थिएँ –
‘केभिन किन रोएको?’
मागिरेहेको छ।’ सजिलो जवाफ दिइ ।
किनिदिए भै हाल्छ नि’ – मैले सामन्य जवाफ दिएँ
तर क्योरोलिनले अलि असामान्य उत्तर दिदै
भनी – ‘यो
उसको बाउँ ज्याकको दायित्व हो । मलै त
यिनको लालनपालन गर्ने हो,
फेरि मैले कहाँबाट ल्याउने दूईसय डलर ! आइ एम ब्रोक !’
अमेरिकीहरुको सामन्य स्वभाव हो । म
रित्तिएको छु अर्थात ‘आइ अम ब्रोक ।’
मसँग छैन, सक्दिन अर्थात यो मेरो दायित्व हैन । यहाँका धेरै
मान्छेभित्रको भावनसँग दायित्वको मिलाप छैन । कहिलेकाही
लाग्छ यिनीहरूसँग भावना नै छैन । ‘क्यारोलिन, मेरा आँखाले अरू पनि यस्ता घटनाहरू देखेका
छन् । म काम गर्ने पसलमा कति यस्तै आमाबाबुहरू
आउँछन् आफ्ना लागि सिगरेट, वियर, वाइन, लटरी जे जे चाहिन्छ त्यसका लागि उनीहरू
उदार हुन्छन् । पचासौ डलर
एकैपटकमा निस्फिक्री खर्च गर्छन् तर आफ्ना साना छोराछोरीले पच्चीस पैसाको चकलेट
माग्यो भने ठाडै ‘नो’ भन्छन् । बच्चा रून्छ । ‘आइ सेड नो’ भन्दै हपार्छन् । त्यो पच्चीस पैसको चकलेट तिर टुलुटुलु हेर्दै गहभरी आँसु लिएर जान्छन ती बच्चाहरू । त्यस्ता
कति बच्चाहरूलाई म
सित्तैमा पनि दिने गर्छु । गहभरीका तिनका आँसुले मभित्रको मलाई पगाल्छ ।’
‘तिमीहरू जति उदार र भावनाका धनी
छौ, त्यस्तो हुन हामीलाई हाम्रो सँस्कारले सिकाएन । हामीलाई हाम्रो हैन, मेरो भन्न
सिकाइन्छ । मैले पनि त्यही सिकेँ, मेरा सन्तानले पनि त्यही सिक्दैछन् । के गर्नु ?
हाम्रो समाज नै यस्तै छ, सबै कुरा मेरोमा अडिएको छ हाम्रोमा हैन ।’ जवाफसँगै
उसको अनुहारमा अहिले अलिकति भावुकता उत्रिएको छ ।
किनी दिंदैन ? अलि
कडा स्वरमा बोली – ‘दिदैन
केही दिदैंन, अदालतले तोकेको
भन्दा एक पैसा पनि दिंदैन। उ धेरै पैसा कमाउँछ तर पाए अझ उल्टो मसँग लिन्छ। उ अति
कण्टक छ, अर्थात म उसलाई नीच
पनि भन्छु । त्यसैले केभिन चार वर्षको हुने
वित्तिकै मैले उसँग डिभोर्स गरेकी हुँ ।
यसको बाउलाई सम्झ्यो कि मलाई अझ
रिस उठ्छ। ‘आइ
अल्सो हेट हिम !’ क्यारोलिनाले
पहिले पनि ज्याकका बारेमा थोरबहुत कुरा गरेकी थिई। बेलाबेला निक्कै असन्तुष्टि
क्यारोलिनाको जवाफ सुनेर म नाजवाफ
हुन्छु । सोच्छु, यत्रो
पैसा कमाउने मान्छे, आफू दिनको सयौं डलर खर्च गर्छ तर आफ्नो छोराका लागि एकपटक
दूईसय डलर खर्च गर्दैन
। सयौं डलरको चिठ्ठा खेल्छ तर छोरालाई
भेट्न जाँदा कहिल्यै एक प्याकेट
विस्कुट लिएर जाँदैन । दिनहुँ आफू वियर
पिउँछ तर आफ्नै सन्तानका लागि उ अदालतले
तोकेको भन्दा एक सुको खर्च गर्न चाहदैंन
! खै माया, ममता, स्नेह, खै
सम्बेदनशीललता, खै वालसुलभ इच्छाको कदर ? यिनको
मन, मन हो कि ढुंगो ? त्यस्तो
बाबु के बाबु ? आफ्नै सन्तानको भरणपोषणका लागि
अदातलले तोकेभन्दा सुकोमाथि केही
नगर्नु भनेको त सरकारलाई कर तिर्नु
जस्तो मात्र हो भन्ठान्ने । केभिन त उसको सन्तान हो
। तर के गर्नु यिनीहरुको सोचाइ र सँस्कार नै यस्तो भएपछि ! म आफैंसँग कुरा गर्छु ।
राम्रै जागिर छ । स्टेट अफिसर छे । उसले पनि किनीदिन सक्थी, जाबो
! तर उ पनि उही हो पैसा भएपछि चिठ्ठा नखेली हुन्न। चिठ्ठा अमेरिकीहरुका
लागि नराम्रो लत हो। कहिलेकाँही खाना खान हिँडेको मान्छे चिठ्ठा
खेलेर रित्तिएपछि भोकै बस्छ तर खेल्न छोड्दैन। धेरैमा छ यो समस्या। क्यारोलिना
पनि पैसा भएपछि निकै उडाउँछे चिठ्ठामा तर जाबो दुईसय डलरको साइकल किन्दिन सक्दिन, आफ्नै छोरालाई ।
नसक्ने हैन नचाहेको हो। नचाहनुको कारण
उसको पूर्व लोग्ने ज्याकको व्यवहार पनि हो। उ सोच्छे
बच्चाको रहर पुरा गर्ने कर्तव्य बाउको हो,
मैले त हरदम स्याहरसुसार गरेकै छु
। लोग्नेसँगको रिसले पनि उ केही गर्न चाहन्न । मनमनै भन्ठाने- ‘विचरा
त्यो निर्दोष वालकको के
पैसा खर्च गर्नु पर्दा कहिलेकाही उनीहरुका
लागि आफ्नै सन्तान पनि पराइको भन्दा परको जस्तो हुन्छ
। थोरै पैसा पनि सन्तान भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ । त्यसैले त यहाँका बाबुआमाप्रति पनि
छोराछोरीको दायित्व केही नै नभएको जस्तो छ । समाज त छ तर सुकेका
रुखको जंगल जस्तो छ ! रूखमा हरियाली भयो भने न छाहारी हुन्छ । यो सबै मेरो भन्ने
सँस्कारको उपज हो यो । बाबुआमा विरामी परे भने पनि कतिपय छोराछोरी जाँदैनन्, एम्बुलेन्स बोलाएर
हस्पिटल जानु भन्छन्, । बुढा बाबुआमा भोकै भए पनि कति छोराछोरीलाई
त्यसको वास्ता हुदैन, सरकारले दिएको छ भन्ने ठान्छन् । नत्र काम गरेर खानु पर्छ
भन्ने सिकेका छन् नांगा रूखको जंगल जस्तो यो समाजबाट । बाबुआमाबाट आफूले जे सिक्छ, आफ्ना
छोराछोरीलाई पनि उसले त्यही सिकाउँदै
गएको छ । त्यो एउटा सँस्कार बनिसकेको छ ।
यस्तै यस्तै अवस्थामा म गुज्रिदै छु । यस्तै यस्तै देख्दै र भोग्दै आएको छु । नसोचेको
सोच्न थालेको छु । नदेखेको देख्न थालेको छु । मैले सोचेको अमेरिकाभित्रको अमेरिका
अहिले देख्दैछु । आफूसँग भएर पनि यिनीहरु आफ्ना वालकको इच्छाको
कदर गर्दैनन् तर भनिन्छ यही मुलुकमा वालवालिकाको इच्छाको सबैभन्दा बढी कदर गरिन्छ ।
टिटूलाई पाँचवर्षको उमेरमा छोडेर आएदेखि
नदेखेको छवर्ष भै सकेको
थियो । सात वर्षको केभिनमा मैले एघार वर्षको टिटु देखेँ । केभिनका इच्छा र मेरो
छोरा टिटुका इच्छा उस्तै हुन सक्छन् । हिजो आफूसँग नहुदाँका अवस्थामा मैले टिटूका धेरै इच्छाहरुलाई वध गर्न लाएको
छु । मेरो अवस्थासँग सम्झौता गरेर उसले पनि आफ्ना इच्छाहरुको हत्या गरेर मलाई सघाएको
छ । उसकी ठूलीआमाको छोरो(दाइ)का खेलौना देखर टिटू लोभ्भिएको, ती खेलौनातिर
टुलुटुलु हेरेको अनुभूत मैले केभिनमा गरे । सोचेँ,
साइकल कुदाएर रमाइलो गरेको देख्दा उसको मन सायद दाइका ती खैलौनाप्रति लोभ्भिएको
टिटूको मन जस्तै हुन्छ होला । दाइका खेलौनातिर टुलुटुलु हेरेर एकोहोरिएका
टिटुका आँखा जस्तै एकोहोरिन्छन् होला केभिनका आँखा पनि उसका साथीका साइकलतिर ! म
भावनाको सागरमा डुब्छु । मेरो मस्तिष्कको महत्वपूर्ण पृष्ठमा छापिएको टिटुको त्यो तस्वीरमा
केभिन अवतरित भएको ठान्छु । अहिले टिटूलाई के चाहिन्छ छोरा भनेर
सोध्यो भने केही चाहिन्न बाबा भन्छ। हुन त अब ठूलो र बुझ्झकी पनि भइसक्यो
तर हिजो जति बेला उसका रहर र इच्छा उभित्र सल्वलाउँथे त्यतिबेलो मैले ती
सबैको वध गर्न लगाएँ । उसले आफ्ना वालसुलभ इच्छा र रहरहरुको विना प्रतिकार निवार्द-निर्विवाद वध गर्यो ।
वालक हो पक्कै भित्रभित्रै खुशी भने
थिएन होला तर पनि उसले असल वालक हुनुको
परिचय दियो । भित्रभित्रै आफू रोएरै
भए पनि मलाइ खुशी बनायो । मेरो लागि अहिले केभिन एउटा क्यानभास हो। टिटूका
ती अवस्थाहरु मेरो मनको भावनाको कुचिले त्यो क्यानभासमा
म निष्कर्षमा पुगेँ – आज मैले जे गरे ठीक गरे,
केभिनलाई नै भए पनि साइकल किनेर टिटुको
इच्छाको पुरानो रिन उ उपर चुक्ता
यस्तै यस्तै सोच्दै म चुपचाप ड्राइभ
गरिरहेको छु । देब्रेहात स्टेरिंगमा छ,
दाहिने हात क्यारोलिनाको हातसँग
खेलिरहेछ । चुपचाप छे क्यारिलिन पनि । त्यसै त्यसै आँखा सुस्ताए जस्तो गरि बन्द गरेकी छे ।
केभिन पछाडिको सीटमा छ, प्रफूल्ल मुद्रामा ।
किन चुपचाप छौ ? आर
यु ओके !’ क्यारोलिनाले
एकाएक झस्काउँछे मलाई । ‘शाइवा,
तिमीले यसलाई किन यत्रो
महँगो साइकल किनिदियौ ? तिमीहरूको जस्तो हाम्रो मन किन छैन ? वास्तमा तिमी कति उदार छौ,
तिमीले कति महानता देखायौ ! आखिर कारण
के हो ?’
मैले छोटो उत्तर दिए – ‘क्यारोलिना, मैले
केभिनमा टिटू देखेँ ! अनि मेरो गाडी दूर्धटना हुँदा तिमीले
पनि त सहयोग गरेकी थियौ नि । ईन्सोरेन्स कंपनीसँग तिमीले नै
‘डिल’ गर्यौ, मेकानिक्ससँग
तिमीले नै ‘डिल’ गर्यौ।’ मैले
टिटूको बारेमा उसलाई अघि अघि पनि
बताएको थिए । ‘हो शाइवा, प्रत्येक
मान्छेले प्रत्येक मान्छेबाट केही न केही कुरा सिक्छ, आज मैले तिमीबाट केही कुरा
भन्दै उसले मेरो हातलाई उसले पटक पटक चुमी । ‘माम्मा ! माम्मा !!’ केभिनले क्यारोलिनालाई जिस्क्यायो । गाडीबाट साइकल
उतार्ने वित्तिकै केभिन साइकल लिएर साथीहरुसँग खेल्ने चौरतिर हुइँकियो।
बाहिर मौसमा अलि गर्मी नै थियो । क्यारोलिनाले भित्र जाउँ भनी ।
दुई क्यान चिसो वियर निकाली र चियर्स गर्दै लामो ‘हग’ गरी अघिको जस्तै । मैले
क्यारोलिनासँग त्यस्तो असहज अनुभव
कहिल्यै गरेको थिइन, जस्तो आज गरे। म कताकता
क्यारोलिनाभित्र हराउँदै गएको हलुका
भइरेको थियो ।
हिँड अर्को कोठामा।’ क्यारोलिनाले मलाई
उ सुत्ने पलङमा बसाइ र भनि –
‘तिमीले केभिनलाई दिएको उपहारको बदलामा म एउटा
उपहार तिमीलाई पनि दिन चाहन्छु
तर तिमी त्यसलाई
स्वीकार्न सहमत हुनु
‘हुन्छ मलाई स्वीकार्य छ,
तर के हो
जस्ट ह्याभिङ् फन’ भन्दै
कम्वल तानी र आफू पनि छोप्पिइ अनि मलाई पनि छोपी।
‘तर क्यारोलिना म त विवाहित हुँ र मैले
तिमीले जस्तो डिभोर्स पनि गरेको छैन।’
मरो यथार्थलाई मैले पुन प्रस्ट्याएँ।
मलाई थाह छ साइवा, तिमीले
धरै पटक भनिसकेको छौ।
‘तर हामी त असल मित्र मात्र हौं हैन र?’ मैले
! त्यही मित्रताभित्रको मित्रता हो यो । मित्रतामा केही
कुरा असम्भव पनि त छैन, हैन र ? तिमी असल
मित्र भएकोले नै यो उपहार म तिमीसामू
सुम्पदै छु अनि केभिनले तिमीबाट उसको
प्रिय वस्तु उपहार पाउनुको उपहार स्वरूप हो यो उपहार । एक पटक मात्र भए पनि म यो
उपहार तिमीलाई सुम्पन चाहन्छु र तिमीले
स्वीकार्छु भनिसकेका छौ । कम अन, शाइवा
केही क्षण पश्चात क्यारोलिनाले मलिन
स्वरमा भनि – धन्यवाद
शाइवा ! मेरो उपहार स्वीकारेर मित्रता निभाएकोमा पुनः धन्यवाद !
हामी अहिले पनि असल मित्र छौ । बेला बेलामा म जान्छु केभिन साइकल तिर हेर्दै भन्छ- 'उपहारको लागि धन्यवाद शाइवा !'